Maamulka Gobolka Nugaal oo Sheegay in ay gacanta Ku dhigeen Argagaxiso iyo Burcad badeed. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Maamulka Gobolka Nugaal oo Sheegay in ay gacanta Ku dhigeen Argagaxiso iyo Burcad badeed.
Masâ€™uuliyiinta sar sare ee Maamulka Gobolka Nugaal ayaa shaaca ka qaaday in ay gacanta kusoo dhigeen dad ay sheegeen in ay yihiin argagaxiso iyo Burcad badeed.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo u waramayey Horseed Media ayaa sheegay in Ciidamada amaanka ee degmada Garoowe ay gacanta ku soo dhigeen kooxo Burcad badeed Soomaali ah iyo kuwa kale uu ku sheegay in lala xiriirinayo falal argagaxiso kuwaasi oo uusan xusin tiradooda rasmiga ah.
Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa sheegay in kooxahaasi ku socdaan baritaan isla markaana cidii danbi lagu helo la horgayn doono Maxkamad sharci ah.
Maqal waraysiga [powerpress]
Waxaa uu intaasi ku daray gudoomiyihu in ay jireen dad eedeysanayaal ah oo markii danbi lagu waayey danbiyo lagu soo eedeeyey ay sii daayeen hayâ€™adaha amaanka ee degmada Garoowe ee caasimada Puntland.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada qaabilsan amaanka ay si wadayaan hawlgalada lagu xoojinayo amaanka guud ee Gobolka.
Dhanka kale mar ay Horseed Media ay weydiisay gudoomiyaha sababta loo xiray Siyaad Cabdirixmaan Jaamac oo u shaqaynayey hayâ€™ado badan oo ay ka mid yihiin Hayâ€™adaha Care International, Save the Children iyo hayâ€™ado kale kaasi oo ciidamada degmada Garoowe ay xabsiga dhigeen bishii 2.6.2010,ayaa waxa uu sheegay in kiiskiisa uu la mid yahay kuwa lagu haysto danbiyada ee dhigiisa ah.
Waxaa kaloo uu sheegay gudoomiyihu in hadii danbi lagu helo Masâ€™uulkaasi maxkamad la saarayo hadii danbi lagu waayana ay xornimadiisa dib ugu soo celin doonaan.
Ugu danbeyntiiÂ Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo sababta dhabta ah ee ka danbeysa xariga Siyaad Cabdirixmaan Jaamac.
C/qani C/laahi Cabdi